Muwaadiniinta Midowga Yurub - InfoFinland
U soo guurista Finland > Muwaadiniinta Midowga Yurub
Waad imaan kartaa Finland haddii aad heysato kaarka aqoonsiga ama baasaboor. Waxaad xaq u leedahay in Finland ka shaqeyso, ganacsade ka noqoto ama wax uga barato si la mid ah muwaadiniinta Finland. Waa in aad noloshaada Finland is-dabartaa.
Si xiriir ah u joogi kartaa ugu badnaan saddex bilood Finland adigoo aan diiwaangelin xaqa joogitaankaada. Haddii aad dooneyso in aad joogto Finland isuna diiwaangeliso sidi degane oo kale, waa in aad heysataa shaqo ama shirkad shaqeysa, goob waxbarasho, xiriir qoys oo waqti dheer ah ama hanti kugu filan.
Haddii aad dooneyso in aad degnaato Finland wax ka badan saddex bilood, waa in aad ka codsataa Hay’adda Socdaalka Finland Diiwaangelinta xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub. Codsiga waa in la sameeyaa ugu dambeyn saddex bilood gudohood laga soo billaabo maalinta soo gelitaanka dalka.
Haddii aad Finland ugu soo guurto si aa du degnaato rasmi ahaan sanad ama waqti ka badan, waa in tagtaa goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ee kuugu dhow.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Isu diiwaangelin degene.
Haddii aad si xiriir ah u joogeyso Finland wax ka yar saddex bilood, uma baahnid in aad codsato diiwaangelinta xaqa joogitaanka. Joogitaanka saddexda bilood waxaa laga soo tirinayaa markasta oo aad tagto meel ka baxsan xuduudaha Finland.
Faahfaahin ku saabsan saamaynta uu fayruska Korona ku leeyahay gaadiidka xuduudaha ka aqri bogga InfoFinland: Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland.
Kaadhka canshuurta (verokortti) ka soo qaado Xafiiska Canshuurta (Verotoimisto) ee kuugu dhow kaddibna u gey shaqo-bixiyahaada.
Haddii shaqada aad ka qabaneyso Finland ay qaadaneyso wax ka badan 3 bilood, ka codso adeegga Enter Finland ama Hay’adda Socdaalka Finland (Maahanmuuttovirasto) ee diwaangelinta xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub.
Haddii aad Finland ugu soo guureyso si aad u degto rasmi ahaan ugu yaraan sanad, tag goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto) oo isu diiwaangeli degane ahaan.
Haddii aad dibadda uga timid Finland si aad uga shaqeyso waxaad u baahan tahay aqoonsiga qofka (henkilötunnus) ee Finnishka. Aqoonsiga qofka waxaad ka heli kartaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto) ama Xafiiska Canshuurta (verotoimisto). Horay u sii qaado:
Kaar aqoonsiga ama baasaboor shaqeynaya
Aqoonsiga shakhsiyeed ee Finnishka waxaad sidoo kale ka heli kartaa Hay’adda socdaalka, marka aad diiwaangashaneyso xuquuqdaa joogitaanka ee muwaadinka Midowga Yurub.
Dhammaan dadka ka shaqeynaya Finland waa in ay heystaan kaadhka canshuurta. Shaqo-bixiyahaada ayaa wuxuu ugu baahan yahay mushaar bixinta iyo canshuurista. Haddii aad ka shaqeyso dhismaha waxaad sidoo kale u baahan tahay lambarka canshuurta (veronumeron). Kaadhka canshuurta iyo lambarka canshuurta waxaad ka heli kartaa xafiiska canshuurta ee kuugu dhow.
Bogga InfoFinlandi Xuquuqda iyo waajibaadka shaqaalaha waxaad ka heleysaa macluumaad dheeraad ah oo loogu talagalay shaqaalaha Finland u soo guuraya.
Haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub ah, waad imaan kartaa Finland si aad shaqo uga raadsato waqti macluul ah.
Bogga InfoFinlandi ee Shaqo ka helista Finland waxaa ku jira macluumaadka ku saabsan sida aad Finland shaqo uga heli karto.
Billaabista shaqada shirkadda ka samee ogeysiiska aasaasidda (perustamisilmoitus) Diiwaanka ganacsiga ee Maamulka diiwaanka iyo ruqsadaha (Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri) iyo maamulka canshuurta (Verohallinto).
Haddii uu joogitaanka Finland qaadanayo wax ka badan 3 bilood, ka codso adeegga Enter Finland ama Hay’adda Socdaalka Finland (Maahanmuuttovirasto) diiwaangelinta xaqa joogitaanka ee muwaadinka Midowga Yurub.
Marka ugu horeysa ee aad diiwaangelinayso shirkadaada, waa in aad buuxisaa ogeysiiska aasaasidda shirkadda, islamarkaasna aad geysaa lifaaqyada loo baahan yahay. Macluumaadka shirkadda waxaad foomka oo kaliya ku ogeysiin kartaa Diiwaanka ganacsiga ee Maamulka diiwaanka iyo ruqsadaha (Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri) iyo diiwaanada Maamulka canshuurta (Verohallinto). Waxaa kale ogeysiiska aasaasidda in lagu lifaaqo loo baahan karaa dhambal ay bixiyeen saraakiisha dowladdaada oo u dhigma dhambalka diiwaanka ganacsiga ee Finnishka.
Qeybta InfoFinlandi Shaqo iyo ganacsi waxaad ka heleysaa macluumaad badan oo ku saabsan nolosha shaqada iyo ka ganacsiga Finland.
Haddii joogitaankaada Finland uu si xiriir ah u qaadanayo wax ka badan saddex bilood, waa in aad ka codsataa adeegga Enter Finland ama Hay’adda Socdaalka Finland (Maahanmuuttovirasto) diiwaangelinta xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub.
Haddii aad si xiriir ah u joogeyso Finland wax ka yar saddex bilood, uma baahnid in aad codsato diiwaangelinta xaqa joogitaanka. Joogitaanka saddexda bilood waxaa laga soo tirinayaa markasta oo aad tagto meel ka baxsan xuduudaha Finalnd. Xeerkan wuxuu quseeya tusaale ahaan ardayga beddelka ah ee Finland wax ku baranaya muddo gaaban oo kaliya (tusaale afar bilood). Haddii aad mararka qaar ka baxdo Finland oo aadan si xiriir ah u joogin wadanka saddex bilood, markaas uma baahnid in aad codsato diiwaangelinta xaqa joogitaanka. Marka ay sidan tahay naftaada u raadso aqoonsiga qofka ee finnishka islamarkaasna ogeysii Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka macluumaadka cinwaankaada.
Bogga InfoFinlandi Ardayga ajnabiga ah ee jooga Finland waxaad ka heleysaa macluumaad loogu talagalay ardayda u soo guureysa Finland.
Haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub ah aadna Finland ugu soo guureyso si aad ula degti xubin qoyskaada kamid ah, waa in aad diiwaangelinta xaqa joogitaanka ee muwaadinka Midowga Yurub uga codsataa xiriir qoys adeegga Enter Finland ama goobta adeegga ee Maahanmuuttovirasto.
Haddii aadan aheyn muwaadin Midowga Yurub ah, laakiin xubinta qoyskaada ka tirsan ee Finland deggan uu yahay muwaadin Midowga Yurub waxaad u baahan tahay kaarka joogitaanka ee xubinta qoyska muwaadinta Midowga Yurub. Waxaa kaarka laga codsadaa adeegga Enter Finland ama goobta Adeegga Hijrada Finland (Maahanmuuttovirasto).
Haddii Finland si aad u degto aad rasmi ahaan u soo guurto, tag goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto) oo isu diiwaangeli degane ahaan.
waalid/waalidka waalidkiis oo aad mas’uul ka tahay
waalid/waalidka waalidkiis ee ay mas’uul ka tahay qofka aad is-qabtaan
Xittaa cunugga ku dhasha Finland ee noqonaya muwaadin wadan ka tirsan Midowga Yurub, Liechtenstein ama Switzerland waa in loo codsadaa diiwaangelinta xaqa joogitaanka. Diiwaangelinta waa in la codsadaa saddex bilood gudahood laga soo billaabo dhalashada cunugga. Faahfaahin dheeraad ah oo mowduuca ku saabsan ka sii aqri bogga InfoFinlandi Finland markii uu ilmuhu dhaso.
Faahfaahin dheeraad ah oo mowduuca ka saabsaan ka sii aqri: Diiwaangelinta xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 14.09.2021 Boggan war-celin ka soo dir